सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, लेखि सेयर गरौं ! मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ । त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले
वास्तवममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो । किन शिब लिंग काे पूजा गरीन्छ ? शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाकाे न कुनै स्वॐरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ ।